- पशुपतिनाथको मृगस्थलीमा जमरामको जुस
पशुपतिनाथको मृगस्थलीमा जमरामको जुस
नेपाल तारा: तपाइँ हामीले हरेक बर्ष दशैँ तथा अन्य चाडपर्वमा समेत जमरा शिरमा जमरा सिउँरिने गर्दै आइरहेका छौं । तपाइँ हामीले आशीर्वादका रुपमा ग्रहण गर्ने यो जमारा स्वास्थ्यका हिसावले समेत एकदम राम्रो मानिन थालेको छ ।
जमराको जुस सेवनले कुनैपनि मानिसमा भएको क्यान्सर, मुटुरोग, दमका रोगी लगायत अन्य रोग रक्तचाप नियन्त्रण,
मोटोपन घटाउन, पाचन प्रणाली, अल्सर, दिसा-पिसाब समस्या लगायतका रोगलाई फाइदा पुर्याउने प्रकाश रुपाखेतीले बताए। उनले भने ‘सुरुको अवस्थाको क्यान्सर हुनेहरुले नियमित जुस सेवन गरेको करीब ९० दिन पछि सुधार देखिन थालेको पाइएको छ’ ।
रुपाखेती एकाबिहानै पशुपतिको मृगस्थलीमा जमारा पेल्ने मसीन र जमरा बोकेर आउछन् ।
। उनले यसरि जमरा बोकेर आउन थालेको करिब करिब पाँच वर्ष भन्दा बढी भयो । आफ्नो बिहानी मानव सेवामा बिताउन चाहाने उनी बताउछन् ।
उनी केहि बर्ष अगाडीसम्म पर्यटन व्यवसायमा आवध्द थिए। त्यसका साथसाथै उनी सास्त्रीय संगीत सिकाउने काम पनि गर्ने गर्दथे । यसै क्रममा गहुँको जमरा बारे थाहा पाएपछि यो कार्यलाई अगाडी बढाउने निधो गरे । कुराकानीका क्रममा रुपाखेतीले भने ‘हामीले कानमा सिउँरिदै आएको जमारा एक आयुर्बेदीक औषधि हो, हाम्रा अग्रजहरुले कम्तिमा चाडपर्वको समयमा भएपनि यो औषधि कानमा सिउँरिने चलन चलाए, हामीले पनि यसैलाई पछ्याउदै आयौ‌ं यो एक आयुर्बेदिक औषधि हो’।
यसमा विभिन्न किसिमको तवतवहरु पाइन्छ त्यसमध्ये यसमा सबैभन्दा बढी क्लोरोफिल पाइन्छ, त्यस्तैस् फाइबर, प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन लगायतका कुरा यसमा पाइन्छ । यसले हाम्रो स्वाथ्यका लागि भरपुर फाइदा दिने रुपाखेती बताउछन्।
रुपाखेतीले अहिले दैनिक २५ देखि ३० कप गहुँको जमराको जुस बेच्दै आएका छन् । सुरु-सुरुमा उनको ब्यापार नै भएन, हरेक दिन जमरा राख्दै यत्तिकै सुकाएर फाल्नु पर्यो केहि समय पछि भने मानिसहरुले यसबारे जिज्ञासा राख्दै उनकोमा यसबारे बुझ्न आउन थाले । आफुले बेचेको जुस सेवनका कारण धेरै फाइदा पुगेको जनाउंदै उनले भने ‘मैले पर्यटन व्यवसायमा धेरै बर्ष आवध्द भएर काम गरे त्यो एउटा सेवा थियो, यो चाहिं त्यो भन्दा पनि ठुलो सेवा हो, ‘मैले यसलाई व्यापारिक भन्दा पनि सेवाको हिसावले हेरेको छु, म कहाँ आउने मध्दे जसलाई अल्लि जटिल समस्या थियो उहाँहरुलाई आफैले जमरा राखेर जुस बनाउने तरिका सिकाएर पठाएको छु । उहाँहरु आजभोली आफै जुस बनाएर सेवन गर्नुहुन्छ’ ।
जमरा राख्ने तरिका:
जमरा राख्नका लागि सबैभन्दा पहिले बिउमा ध्यान दिनु पर्दछ। यसका लागि बिषादि प्रयोग नगरिएको बिउ आवश्यक पर्छ। लोकल गहुँ जमराका लागि उचित हुन्छ । बिउ जुट्याइसकेपछि गहुँलाई कम्तिमा ८ घण्टासम्म भिजाएर राख्नु पर्दछ । त्यसपछि कुनै माटोको भाँडा वा प्वाल परेको अन्य प्लास्टिकको भाँडा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । उक्त भाँडामा अलिकति माटो राख्नु पर्दछ र सोहिमात्रामा गहुँ छर्नु पर्दछ। यसलाई सिधा घाम नपर्ने उज्यालोमा राख्न सकिन्छ । यो करिब ( करिब ३ दिन पछि टुसाउन थाल्छ।
जमराबाट जुस बनाउने तरिका:
यसरी एक हप्ता सम्म फरक-फरक भाँडामा जमरा उमार्ने र जमारा १० सेन्टिमिटर जति अग्लो भएपछी हरेक भाँडाको जमरा क्रमिक रुपमा पालै पालो जुसको रुपमा सेवन गर्न सकिन्छ । जसका लागि आवश्यक मात्राका आधारमा जमरा लिएर सफासँग धुनु पर्दछ। त्यसपछि यसलाई कुनै वस्तुले थिचेर साथै पिसेर समेत रस निकाल्न सकिन्छ । यसरी निकालिएको रसलाइ मात्राको ४० प्रतिशत पानी मिसाई सेवन गर्न सकिन्छ । यसमा हल्का गुलियोपन पनि हुने भएकाले जो कोहिले पनि सहजै सेवन गर्न सकिन्छ।
कति मात्रामा सेवन गर्न सकिन्छ:
यसरी उमारिएको जमारा सेवन गर्दा निश्चित मात्राका आधारमा मात्र सेवन गर्नुपर्दछ अन्यथा यसले रक्तचाप लगायत अन्य कुरामा असर पनि गर्न सक्दछ । कुनै रोगबाट संक्रमित व्यक्तिले ४५ मि.लि. सम्म सेवन गर्दा राम्रो हुन्छ सामान्यतया साधारण व्यक्तिले कम्तिमा ३० मि.लि. देखि ३५ मि.लि. सम्म सेवन गर्नु पर्दछ। बानि पर्दै जाँदा यसको मात्रा थोरै बढाउन पनि सकिन्छ ।